पर्फोरेटेड स्क्रिन ट्यूब फिल्टर र बास्केट स्टेनलेस स्टील पर्फोरेटेड पाइप
स्टेनलेस स्टील छिद्रित प्लेटहरूले विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरू र प्रयोगहरू प्रशोधन गर्न सक्छन्, जस्तै धातु छिद्रित पाइपहरू, धातु छिद्रित पाइप फिल्टरहरू, आदि, निर्माण, रासायनिक, खनन, तेल प्रशोधन र अन्य उद्योगहरूमा प्रयोग हुने अनन्त प्रयोगहरूका साथ।
स्टेनलेस स्टील छिद्रित पाइपको उपलब्ध पास ढाँचाहरू राउन्ड, स्क्वायर, हेक्सागोनल, अण्डाकार र विशेष ओपनिङहरू समावेश छन्।
सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग हुने स्टेनलेस स्टील छिद्रित ट्यूबहरू 304, 304L, 316, 316L समावेश छन्। कार्बन स्टील पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
छिद्रित स्टेनलेस स्टील ट्यूब T304 स्टेनलेस स्टील प्लेट वा T316 स्टेनलेस स्टील प्लेट बनेको छ। यी ट्यूब प्लेटहरूमा प्वालहरूको श्रृंखला छ, जुन तपाईंको लागि डिजाइन गर्न सकिन्छ। प्वालहरूको आकार, प्वालहरू बीचको दूरी र सामग्रीको मोटाईको आधारमा ढाँचाहरू भिन्न हुन सक्छन्।
कार्बन स्टीलको विपरीत, स्टेनलेस स्टीलको जंग प्रतिरोध छ। यसमा क्रोमियम हुन्छ, जसले अक्सिजनको सम्पर्कमा आउँदा अदृश्य सुरक्षात्मक फिल्म बनाउँछ। स्टेनलेस स्टील को कडा क्षमता अनुसार, यो तीन कोटि मा विभाजन गर्न सकिन्छ। अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टीलहरू जुन चिसो कामले कडा बनाउन सकिन्छ डिजाइन मापदण्डहरूको विस्तृत दायरा पूरा गर्दछ। तिनीहरू अनिवार्य रूपमा गैर-चुम्बकीय हुन्, यद्यपि तिनीहरू चिसो कामको कारण थोरै चुम्बकीय हुन सक्छन्।
स्टेनलेस स्टील छिद्रित ट्यूबहरू सीधा क्रोमियम प्रकारका हुन्छन् र तातो उपचारद्वारा कडा गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको सामान्य स्टेनलेस स्टील्स मध्ये एक। यसमा उत्कृष्ट शक्ति, जंग प्रतिरोध र निर्माण प्रक्रिया छ। वेल्डिङको समयमा कार्बाइडको वर्षा कम गर्नको लागि, कार्बन सामग्री कम हुँदा 304L प्रयोग गरिन्छ।
अन्य 300 श्रृंखला मिश्र धातुहरु संग तुलनामा, यो कठोर संक्षारक वातावरण (जस्तै समुद्री पानी, रसायन, आदि) मा प्रयोग गर्दा उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध छ। वेल्डिङको समयमा कार्बाइडको वर्षा कम गर्नको लागि, 316L यसको कम कार्बन सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
1.) द्रुत प्रतिक्रिया:
भविष्यमा यो सधैं महँगो हुन्छ। उच्च संचार दक्षता, हाम्रो छिटो प्रतिक्रिया प्राप्त। तपाईंको सोधपुछ 8 घण्टा भित्र जवाफ दिइनेछ;
2.) हाम्रो प्राविधिक टोलीले तपाइँलाई तपाइँका विचारहरू दृश्य डिजाइनमा अनुवाद गर्न मद्दत गर्न सक्छ, र यो निःशुल्क छ; नि: शुल्क CDA डिजाइन;
3.) नमूना: ठूलो उत्पादन अघि आफ्नो पुष्टिकरण को लागी नमूनाहरु को एक ठूलो संख्या प्रदान गर्नुहोस्;
4.) निरीक्षण: कडा गुणस्तर नियन्त्रणले सन्तोषजनक उत्पादनहरू तपाईंलाई डेलिभर गर्न सकिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ;
यातायात व्यवस्था: विभिन्न वस्तुहरू किन्न? थप बचत गर्न हामीलाई सँगै पठाउनुहोस्।
अघिल्लो: सडक केन्द्रीय अलगाव नगरपालिका सडक रेलिंग
अर्को: बहु तह स्टेनलेस स्टील प्रशोधन मुद्रांकन फिल्टर स्क्रिन प्याक
स्टेनलेस स्टील 316 उच्च गुणस्तर बार्बेक्यु तार ...
स्टेनलेस स्टील बारबेक्यू जाल सामग्री स्टेनलेस स्टील तार, कम कार्बन जस्ती तार। बुनाई र सुविधाहरू: बुना र वेल्डेड; उच्च तापमान प्रतिरोध, कुनै विरूपण, कुनै खिया, गैर-विषाक्त र स्वादहीन, प्रयोग गर्न सजिलो; स्टेनलेस स्टील बार्बेक्यु जाल आकार गोलो, वर्ग, चाप, आदि मा विभाजित। स्टेनलेस स्टील बार्बेक्यु जाल प्रक्रिया फ्ल्याट बुना जाल, knurled जाल, आर्गन आर्क वेल्डिंग, स्पट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक पालिश बारबेक्यू जाल को प्रकार: वर्ग एम्बोस्ड बारबेक्यू मलाई...
जोन्सन स्टेनलेस स्टील वी-तार कुवा स्क्रिन ट्यूब निर्माताका फाइदाहरू 1. ठूलो खोल्ने क्षेत्र भएको स्क्रिन पाइप उच्च गुणस्तरको पानीको इनार, तेलको कुवा र ग्यासको इनारहरूको निर्माणको लागि बढी उपयुक्त हुन्छ। 2. कम सञ्चालन लागत र ठूलो खनन क्षेत्र भएको स्क्रिन भूमिगत पानी घुसपैठ गर्न अनुकूल छ। प्रचुर मात्रामा जलस्रोतले पानीको स्तर घटाउन र ऊर्जा खपत बचत गर्न सक्छ। 3. समान परिस्थितिहरूमा, उच्च खुला क्षेत्रले ग्राउन्डवाको गति बनाउन सक्छ ...
स्टेनलेस स्टील 304/316 मल्टिलेयर sintered भेट...
मुख्य विशेषताहरु उच्च porosity र उत्कृष्ट पारगम्यता, कम दबाव हानि र ठूलो प्रवाह हो; ठूलो ढल क्षमता, उच्च निस्पंदन सटीकता र लामो प्रतिस्थापन चक्र प्रयोगमा उच्च दबाव; यो उत्कृष्ट तापमान प्रतिरोध र जंग प्रतिरोध छ, 600 ℃ मा लामो समय को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, र नाइट्रिक एसिड, क्षार, जैविक विलायक र औषधि को जंग प्रतिरोध गर्न सक्छ; फिल्टरिङ क्षेत्र बढाउन वेभ तोड्न सकिन्छ, र वेल्डिङले तरललाई बलियो बनाउन सक्छ...